चिसोमा छालालाई जोगाउन घाममा बस्नु हुदैन : छाला रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा.माधव गौतम
शुक्रबार, पुष ०९, २०७८ मा प्रकाशित
पाँचथर । जाडोयाम शुरु भएसँगै छालासम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिन थाल्छन् । यसबेला छाला सुक्खा हुने हुँदा फुट्ने, सुन्निने, रातो हुने, चिलाउने, खस्रो हुने जस्ता समस्या देखिने गर्छन् । मिजोन छाला तथा प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल दमक झापाका छाला तथा सौर्न्दर्य विशेषज्ञ डाक्टर माधव गौतमसँग केन्जो खवर डटकमकि सम्पादक सरला रेग्मिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
चिसो मौसममा छालाको सुरक्षा कसरी गर्ने?
चिसो मौसममा छालाको सुरक्षा गर्नको लागि पहिलो नम्बरमा पानी अत्याधिक खाने, अर्कोकुरा जाडो बढे संगै नुहाउदा धेरै तातो पानी प्रयोग गर्छौ त्यस्तो गर्नु हुदैन । तातो पानीलाइ पुरै अबोइट गर्ने, मनतातो पानीको प्रयोग गर्ने ।
डाइटमा नुनको मात्रा कम गर्ने, कम्तिमा पनि दिनमा एक पटक मस्चराइजरको प्रयोग गर्ने । मस्चराइजर प्रयोग गर्दा नरिवलको तेल मिसाएर प्रयोग गर्ने, त्यसो गर्दा लामो समय छाला सुख्खा हुन पाउदैन ।
चिसोमा छालामा कस्तो समस्या देखिन्छन् ?
बिशेषगरि छाला सुख्खा हुने, हात खुट्टा पटपटी फुट्ने, फङगस इन्फेक्सन हुने, छाला कालो ( पिग्मेन्टेसन) हुने समस्या देखिन्छ ।
घाममा बस्दा छालामा समस्या हुन्छ?
हुन्छ , छाला कालो हुने, सोलार एलर्जी हुने, चिसोमा घाम ताप्नु छालाको लागि समस्या हो । घाममा बस्दा छाला कालो हुनुको साथै छालाको क्षमता घट्ने, छालाको शक्तिमा ह्रास आउने हुन्छ । छालाको क्यान्सर हुने, डंडीफोर आउने समस्या हुन्छ । अझ बच्चाहरुमा एलर्जी हुने जिउ चिलाउने चान्स धेरै हुन्छ ।
चिसोमा छाला हुने एलर्जी बाट कसरी बच्न के गर्ने ?
छालाको एलर्जी धेरै टाइपको हुन्छ, छालाको केसको कुरा गर्दा चै सके सम्म चिसोमा मासु नखानु, बिशेषगरि बच्चालाइ मासु दिदै नदिनु, अनि नया खानेकुरा पहिला नखाएको खानेकुरा नदिने, एड्ल्टको केसमा चै सनबल्क लगाउने, छालामा एब्जब हुने क्रिमको प्रयोग गर्ने, पानी अत्याधिक सेवन गर्ने ।
छालाको समस्या कपडाको कारणपनि हुन्छ ?
कपडाको केसमा चै एकदम रियर्ली मात्र हुन्छ, कहिलेकाही नया कपडा लगाउदा त्यो समस्या आउँछ ।
छाला सुख्खा हुन नदिन के कुरामा बिशेष ध्यान दिने ?
डाइटमा ध्यान दिने, फलफूल एकदमै धेरै खाने, पानीको सेवन धेरै गर्ने, समयमा सुत्ने, समयमा उढ्ने,धेरै तातोपानीले ननुहाउने, ब्यायाम गर्ने, शरिरलाइ तातो बनाउने काम गर्ने, घाममा नबस्ने, न्यानो लुगा लगाएर शरीरलाई तताउने, चलेको कम्पनीको मस्चराइजरमा नरिवलको तेल मिसाएर लगाउने ।
छालामा कुनै समस्या आइहाल्यो भने अरुको अनुभवको आधारमा जुनसुकै क्रिम लगाउने वा औषधि खाने गर्नु कत्तिको ठिक हो ?
यो एकदैमै नराम्रो बानी हो । छाला हेर्दा सामान्य देखिएपनी यो एकदमै संबेदनसिल हुन्छ । सबैको छाला एकै प्रकारको हुदैन, अरुलाइ रेकमन्डेसन गरेको क्रिमले साइड इफेक्ट हुन सक्छ । सधै भरी पोतोको सिकार हुने, छाला रातो हुने, सधै इन्फेकसन आइरहने, त्यही भएर छालाको केसमा डक्टरको सल्लाह बिना क्रिम, लोसन प्रयोग नगरेकै राम्रो हुन्छ ।
क्रिम किन्दा बिशेष के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ?
क्रीम किन्दा बिशेषगरि आफ्नो छालाको टाइप अनुसार किन्नु उपयुक्त हुन्छ । कसैको छाला सुख्खा छ भने सुख्खा छालाको क्रीम, ओइलि, नर्मल, सेन्सेटिभ, कम्बिनेसन आफ्नो छाला कस्तो छ त्यो अनुसारको क्रीम लगाउने, अर्को कुरा अलि चलेको ब्राण्डको क्रीम प्रयोग गर्नु पर्छ । बजारमा उपलब्ध जस्तो सुकै क्रीम प्रयोग गर्नु हुदैन ।
उमेर अनुसार क्रीम लगाउन कत्तिको जरुरी हुन्छ ?
एकदमै जरुरी हुन्छ । किनकी २५ बर्ष पुगेपछी एजिङ्न प्रोसेस सुरुहुन्छ । छालामा विभिन्न समस्याहरु देखा पर्न थाल्छन यो महिलाको केसमा पुरुषको ३० बर्षबाट शुरुहुन्छ । हाम्रो जुन फममा नेचुरल छाला हुन्छ, उमेर पुगिसकेपछि क्रिमले चै निउट्रेसनको काम गर्छ । घामबाट बच्न सनबल्क लगाउनु पर्छ । ब्राण्डका क्रिमले चै हाम्रो छाला अनुसारको काम गर्ने भएकाले उमेर अनुसार मात्र होइन आफ्नो छाला अनुसारपनी क्रिम प्रयोग गर्नु पर्छ ।
कपालहरु फुल्ने कारण छालाको कारण हो या अन्य कारण ले फुल्छ ?
एउटा वशांणुगत कारणले पनि कपाल फुल्छ । कपाल फुल्ने कारण अर्को चै जुन पर्मानेन्ट कलर हुन्छ हाम्रो त्यो नै सकिएर फुलेको हो ।अनि अर्को हामिले खानेकुराले पनि त्यस्लाइ असर गरेको हो । अत्याधिक नुन सेवन,पानी कम खाने, कपाललाइ सुख्खा राख्ने, जुनपायो त्यही साबुनको प्रयोग गर्ने, प्याजको मात्र कम खाने कारणले पनि कपाल फुल्छ, कपाललाइ प्रोटिन नपुगेको कारण कपाल फुल्ने गर्छ । अनि कुनै रोग छ भने पनि फुल्छ,समय अगाडि नै कपालको हेरचाह गर्ने भिटामिन युक्त खानेकुरा खाने ।
उमेर नपुगी छाला तन्किने, चाउरिने समस्या देखिन्छ ,यस्लाइ कम गर्न या लामो समय सम्म युवा देखिन के गर्ने ?
छालाको प्रमुख शत्रु भनेको तातो पानी हो,यस्बाट बच्ने,तातो हावा, तातो पानी लगाएत तातो चिजबाट बच्ने, छालालाइ सुख्खा हुन नदिने, छालालाइ जोगाउन छाला सुहाउदो क्रिम लगाउने, नुन,चिल्लो,फुटेको,फ्राइ, पिरो नखाने, धेरै माछा मासु नखाने ।